Nahoko Kojima sy ilay trozona taratasy 32 metatra | Famoronana an-tserasera
Nahoko Kojima dia tokony hitsahatra tsy ho variana amin'ilay trozona goavambe vita amin'ny taratasy. Mpanakanto iray izay nanao ny laharam-pahamehana tany Thailandy niaraka tamin'io sary sokitra vita tanana io tamin'ny taratasy japoney "shiro".
Miatrika ny asa lehibe indrindra nataon'ity mpanakanto ity izahay ary mahatratra izany hahatratra 32 metatra ny halavany. Asa vita amin'ny taratasy nalaina avy amina taratasy roa goavambe notapahin-tanana tanteraka.
Asa vita tanana iray izay nanaovan'i Nahoko Kojima fanaintainana asongadino ny hasasatr'ilay asa izay tsy nampiasa milina. Sangan'asa nentanim-panahy avy amin'ilay trozona hita tany Hawaii avy amin'ilay mpanakanto mihitsy.
Ny fahitana an'io trozona io tamin'ny masony manokana no nanombohany ny fandalinana ireo cetaceans goavambe ireo izay manjaka ny ranomasina miaraka amin'ireo olo-malaza ananany ary ireo vombony mamela azy ireo hiampita ny tany avy any atsinanana ka hatrany andrefana.
Nahoko Kojima manao a fifamatorana manokana miaraka amin'ny kirie nentim-paharazana, na koa antsoina hoe ny zavakanto Japoney fanaovana hosodoko. Taratasy misy ampahany lehibe sy ny fiezahany isan'andro hanapaka ireo takelaka ireo miorina amin'ny sary nataony manokana nandritra ny volana maro.
Asa goavambe izay nampiasàny fotoana be dia be atsangano ilay trozona taratasy lehibe. Mila toerana be dia be vao afaka mampiantrano sombin-javatra mahatratra 32 metatra ny halavany. Ankoatry ny fahafahany mamindra azy ka tonga lafatra toa ny namolavolan'ny Kojima azy.
Asa vita taratasy washi namboarin'ny fikosoham-taratasy avy any Japon izay nahavita nandrefy azy ary nandany volana maro hanakanana ny mpanakanto tenany. Mba hitaterana ny asa, ireo sombin-taratasy dia tsy maintsy nosarahina tamin'ny lafiny iray ary nakodia, raha tsy maintsy nangonina kosa izy ireo taty aoriana mba hampiakatra ny trozona taratasy.
Azonao atao ny manaraka ny asan'i Kojima avy amin'ny tranokalanao; ho an'ny hafa taratasy, araho ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Trozona 32 metatra lehibe vita amin'ny taratasy nataon'i Nahoko Kojima